WAR LA SUGAYAY: Zidane Oo Afka Furtay, Juventus Oo Jacaylkeeda Uu Qiray Iyo Del Piero Oo Xasuusiyey Waayo Hore - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWAR LA SUGAYAY: Zidane Oo Afka Furtay, Juventus Oo Jacaylkeeda Uu Qiray Iyo Del Piero Oo Xasuusiyey Waayo Hore
WAR LA SUGAYAY: Zidane Oo Afka Furtay, Juventus Oo Jacaylkeeda Uu Qiray Iyo Del Piero Oo Xasuusiyey Waayo Hore
April 7, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Kaddib markii ay soo dhamaatay ciyaartii xalay ay Real Madrid ku garaacday Liverpool, tababare Zinedine Zidane ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa Real Madrid, waxaanu shaaciyey in muhiim ay u tahay kooxda Talyaaniga ee Juventus oo waqtigii uu ciyaartoyga ahaa uu ku qaatay muddo shan sannadood ah.
Real Madrid ayaa guul 3-1 ah ka gaadhay Liverpool lugta hore ee wareegga siddeedda Champions League, waxaana markii ay ciyaartaasi sii dhamaatay uu hor yimid warbaahinta oo ay ku jireen kuwo laga leeyahay Talyaaniga.
Halyeygii Juventus ee Alessandro Del Piero oo ay Zinedine Zidane usoo wada ciyaareen kooxdaas ayaa khadka soo galay intii uu ZIZOU warbaahinta la hadlayay, waxaanu kusoo tuuray su’aal ay jawaabteedu hadal hayn dhalisay.
Del Piero ayaa weydiiyey Zidane, haddii uu tabay isaga (Del Piero ahaan) ama uu u darsaday noloshii Talyaaniga, waxaanu Zidane ku jawaabay: “Labadaba waan tebay. Talyaanigu qalbiga ayuu igaga yaalaa, waxaan kusoo qaatay shan sannadood Turin iyo Juventus, walina muhiim ayay ii yihiin.”
Warbaahinta uu la hadlayay oo ahayd Sky Italia, ayaa waxa kael oo Del Piero oo toos ugu jiray khadka uu weydiiyey su’aal kale oo ahayd haddii uu tegayo Juventus oo la sheegayo inay caydhinayso Andrea Pirlo, waxaanu Zidane ku jawaabay: “Mustaqbalka in aan tegayo Juventus? Hadda halkan ayaan joogaa, waanaynu arki doonaa.”
Zidane ayaa markii uu su’aashan dambe ka jawaabayay sameeyey dhoola-caddayn, halka uu Del Piero qoslay.
Hadalkan Zidane ayaa yimid waxyar kaddib markii uu murashaxa Madaxweynaha Real Madrid ee Riquelme uu shaaciyey in haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada kooxdaas ee soo socota, in Zidane aanu sii ahaan doonin tababarihiisa oo uu eryi doono, isla markaana falsafad ciyaareed oo kale uu kooxda ka bilaabi doono.